Famerenana mamorona ho an'ny mpamorona tranonkala, mpamorona sary, ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Graphic Design, maro
Androany isika dia hampianatra sy hanome lanja mpamorona tranonkala indray, mpamorona sary, mpamorona lamaody ary mpanao sary. Saingy ny ohatra (tena izy) izay entinay dia azo ampifanarahana amin'ny filan'ny typographer, mpamorona indostrialy, mpanakanto ...
Manoro hevitra anao izahay hijerena azy ireo ary hiaraka aminay amin'ity fitsangatsanganana ity, avelao ny fanombatombanana sy ny fiatraikany ao anaty hevitra: azo inoana fa, amin'ny fotoana sasany, tsy mitovy ny hevitray. Tonga mpifidy mandritra ny fotoana fohy. Ataovy!
Mitohy indray ny famoronana
Fandaharam-pianarana misy tsanganana telo izay anavahana ny lohateny, izay ametrahan'ny mpanoratra ny anarany, a sary sarika sy fampahalalana fototra (ny toerana misy anao sy ny faritra iasanao miasa miaraka amina famaritana fohy ny zavatra nianaranao sy ny zavatra tadiavinao). Raha ny hevitro: ambiny mamintina (fandaharam-pianarana amin'ny teny frantsay) ary fampahalalana marobe ao amin'ny lohateny.
Fandaharam-pianarana amin'ny faritra volondavenona natsangana tsanganana tokana. Tsy fantatro ny momba anao, saingy sahirana aho amin'ny fomba nanapahanao hevitra fa hanome lanja ny fianaranao sy ny fahaizanao teknika, raha ampitahaina amin'ny atiny sisa.
Rehefa mahita azy ianao dia liana amin'ny famakiana azy, marina? Tsy misy manohitra an'ity resume ity amin'ny tsanganana 3. Ny fametrahana ny fanoharana...
Tsara ity resume avy amin'i Melissa Washin ity. Indraindray mifidy tsara fotsiny ny fanampiana efa manao fiovana lehibe isika. Tsy handray azy ve ianao?
Fomba mahaliana amin'ny fakana vaovao, izay mampahatsiahy ahy ny famolavolana andian-teny sy teny nalaina izay tena nahomby tamin'ny Internet. ny karazana infographic amin'ny loko mainty sy fotsy izay nanapahan'ny mpanoratra hevitra fa hiaraka amin'ny karatra fandraharahana ihany koa.
Robbie Bautista dia te hampiseho mazava tsara ny zavatra niainany, mamaritra amin'ny isan-jato ny sokajy ny asa teo aloha. Ohatra iray amin'ny fomba asio sary amin'ny resume.
Mpamorona tranonkala izay nanangana a tena mahazo aina mamaky modely. Ny fandaharam-pianarana dia misy tsanganana sy lohateny 3, toy ilay voalohany hitantsika tamin'ity lahatsoratra ity. Fa ny fizarana ireo singa dia samy hafa tanteraka, amin'ny fomba izay fantatry ny maso amin'ny fotoana rehetra fa ny fampahalalana manan-danja dia eo afovoan'ny pejy. Tiako ity.
Kely mikasika ny Loko haran-dranomasina ho an'ny resume telo-tsanganana.
Fandaharam-pianarana amin'ny endrika Sary torohay. Tena mahaliana.
Ashley Spencer no anarako. Mieritreritra ianao ... Mpianatra nahazo mari-pahaizana Grika hafa. » mamirapiratra miantso-to-hetsika natokana ho an'ireo matihanina efa leo mahita resume an'arivony vao nahazo diplaoma.
Tsanganana maro no manana ny tohin'ny Sayda Muckenhirn izay nitantarana ny traikefa sy ny fanabeazana Tantara amin'ny.
sary. Mazava izany, sa tsy izany? Toy izany koa, manana be dia be aho Curriculum vitae. Raha tsy izany, tsara.
Zhi dia nisafidy ny hanondro ny haavon'ny fahaizany amin'ny kisary miloko. Lehibe loatra amin'ny tsiriko.
Feo tsy ara-potoana izay mahasarika ny maso raha vao jerena ary fampisehoana mahafinaritra ny portfolio nomerika: a pendrive miendrika lakile.
(Mpanoratra tsy fantatra)
Raha manolo isika CV amin'ny anaran'ny mpamorona… Lavorary! Inona ny hevitrao?
Fandaharam-pianarana amin'ny tsanganana roa miaraka amin'ny lohateny. Tsy mahazo aina ny vakiteny, ary manampy loko manga miaraka amin'ny manga.
Farany fa tsy farany, ny resume nataon'i Jennifer Cheng. Fandaharam-pianarana misy tsanganana roa izay miavaka ny hakanton'ny sary famantaranao, tsy isalasalana. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Manohy ny famoronana ho an'ny mpamorona tranonkala, mpamorona sary, mpanao sary ary maro hafa
Tiako i Jennifer Cheng, filaminana tsy misy artifice.
Ny andiam-pananganana cvs mamorona tsara indrindra hitako. Miovaova sy mifintina.